आईपीएलका ८ रेकर्ड जुन टुट्न निकै मुस्किल छ | Express Samachar.com
८ महिना अगाडि ८ महिना अगाडि Abinash Thapa	0 Comments dream11ipl, ipl, ipl2020, आईपीएलका ८ रेकर्ड
ईन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) सर्वाधिक चर्चित र रोमाञ्चक लिग हो। ब्याट्सम्यानका ठुला प्रहार, घातक बलिङ र उत्तिकै शानदार फिल्डिङले आइपिएललाई उत्कृस्ट लिग बनाउछ। आइपिएल अबधि भर उत्कृष्ट क्रीकेटको आनन्द उठाउने गर्छन्। सन् २००८ मा पहिलो पटक आयोजना भएको आईपिएलका थुप्रै अविस्मरणीय क्षणहरु छन् जसलाई समर्थकहरुले लामो समयसम्म याद गर्नेछन्। १२ वर्ष पुरानो प्रतियोगिताको उपाधि जित्न टोलिहरुको रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेगर्छ। यो पटक लिगको आयोजना युएईमा सेप्टेम्बर १९ बाट हुँदैछ जसमा सधैझैं ८ टोलि सहभागी हुनेछन्।
क्रिकेटमा रेकर्डको ठुलो महत्व हुने गर्छ जसले खेललाई थप रोमान्चक बनाउने गर्छ। आईपिएलमा पनि प्रत्येक संस्करणमा थुप्रै किर्तिमानहरु बन्छन् र तोडिन्छन्। तर केही यस्ता रेकर्ड पनि छन् जुन धेरै वर्ष देखि कायम रहदै आएको छ र आउने दिनमा पनि टुट्न मुश्किल छ।आईपिएलमा बनेका त्यस्तै तोड्न मुस्किल ५ वटा रेकर्डको बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ :-
१. कोलकाताको लगातार जितको कीर्तिमान
२ पटक आईपीएल उपाधी जितेको कोलकाता नाइट राइडर्स आईपिएलको एक सफल टोलि हो।
निकै सन्तुलित टिम हुनु बाबजुद कोलकाताले सुरुवाती सिजनमा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। २०११ मा गौतम गम्भीरलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएपछि भने कोलकाताले सफलता चुम्न थालेको थियो। कोलकाताले २०१२ मा करेबियन खेलाडी सुनिल नारायणलाई अनुबन्ध गर्नु निकै फलदायी सावित रह्यो। कोलकाताले सोही सिजन फाइनलमा चेन्नाइ सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक जित्यो।
२०१४ को सिजनको बिर्संलायक सुरुवत गरेको कोलकाताले सुरुवाती ७ खेलमा केवल २ जित हात पारेको थियो। कोलकाता प्रतियोगिताबाट बाहिने त्रासमा थियो। चमत्कारीक प्रदर्शनले मात्र कोलकाता अन्तिम ४ मा पुग्न सक्थ्यो। अन्तिममा सोही अनुरुपनै कोलकाताले खेल जित्दै गयो।
कोलकाताले लगातार ९ खेल जित्ने क्रममा फाइनल खेलमा किङ्स-११ पन्जाबलाई पराजित गर्दै दोस्रो पटक आइपिएल उपाधी हात पार्यो। २०१५ को सुरुवाती खेलमा कोलकाताले मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गर्दै लगातार १० खेलमा जित हात पार्दै लामो विजयी यात्राको रेकर्ड दर्ता गरेको थियो। बिराट कोहली कप्तानीको बैंगलोरले कोलकातालाई पराजित गर्दै अपराजित यात्रालाई पूर्णविराम लगाएको थियो।
आईपीएलको प्रतिस्पर्धात्मक स्टेजमा टिमहरु एक खेल जित्न संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिमा एकै टिमले लगातार ११ खेलमा जित पार्दै कोलकाताको कीर्तिमान तोड्न निकै मुस्किल छ।
२. जोसेफको अपत्यारिलो स्पेल
टि-२० क्रिकेटमा अक्सर ब्याट्सम्यानहरु बलरमाथि हावी हुने गर्छन्। तर, आइपिएलमा कैयौं पटक बलरहरुले त्यसको विपरित गरेका छन्।
२००८ अर्थात् पहिलो आईपीएलमा पाकिस्तानी बायाँ हाते फास्ट बलर सोहेल तनविरले अचम्मको बलिंग प्रदर्शन गरेका थिए जुन आज पनी अधिकांश समर्थकहरुको दिमागमा ताजा छ। उनले ४ ओभर बलिङ गर्ने क्रममा मात्र १४ रन खर्चेर ६ विकेट हात पारेका थिए। उनले चेन्नाइको ब्याटिङ क्रम तहसनहस पारेका थिए। उनको यो उत्कृष्ट बलिङ स्पेल ११ वर्षसम्म कायम रहेको थियो।
२०१९ मा करेबियन फास्ट बलर अल्जारी जोसेफले तनविरको ११ वर्षसम्म कायम रहेको रेकर्ड तोडेका थिए। मुम्बईको प्रतिनिधित्व गरेका जोसेफले हैदराबाद विरुद्ध ३.४ ओभर गर्दा मात्र १२ रन दिएर ६ विकेट हासिल गरेका थिए। सोहि प्रदर्शनले मुम्बई उक्त खेलमा १३७ रनको झिनो लक्ष जोगाउन सफल भएको थियो।
प्रतियोगितामा ब्याट्सम्यानको दबदबा रहदै आएको कारण उनको उत्कृष्ट बलिङ स्पेलको रेकर्ड तोड्न मुस्किल रहने देखिन्छ।
३. गेलको रन सगरमाथा
विस्फोटक ओपनिंग ब्याट्सम्यान क्रिस गेल टि-२० क्रिकेटमा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मध्ये गनिन्छन्। बायाँ हाते आक्रामक ब्याट्सम्यान गेले क्रिजमा जमेका दिन बिपक्षी बलिंग आक्रमण ध्वस्त पार्दै आफ्नै दममा खेल जिताउछन्।
‘युनिभर्स बोस’ उपनामले चिनिने गेलले आफ्नो शानदार करियरमा थुप्रै अविश्वसनीय पारिहरु खेलेका छन्। तर, २०१३ मा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले पुने वारियर्स विरुद्ध खेलेको पारि अविस्मरणीय छ। उनले उक्त खेलमा टि-२० क्रिकेट इतिहासकै सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर दर्ता गर्ने क्रममा १७५ रन बनाएका थिए। उक्त रेकर्ड अहिलेसम्म टि-२० र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट दुवैमा तोडिएको छैन।
टि-२० मा टिमनै १७५ रनको योगफल बनाउन संघर्ष गर्छ। तर गेल एक्लैले ६६ बलमा १७ छक्का र १३ चौकाको मद्धतमा उक्त विशाल पारि खेलेका थिए। चिन्नस्वामीमा सम्पन्न खेलमा मात्र ३० बलमा शतक बनाउदै सबैभन्दा छिटो शतक बनाउने किर्तिमान पनि गेलले आफ्नो नाम गरेका थिए। उक्त रेकर्ड पनि आईपीएलमा अझै कसैले तोड्न सकेका छैनन्। गेलको इनिंग मद्दतले बैंगलोरले २६३ रनको योगफल खडा गरेको थियो। जवाफी ब्याटिंगमा उत्रिएको पुने गेलको व्यक्तिगत स्कोर भन्दा ४२ रन कममा समेटिएको थियो।
उनको सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर तथा छिटो शतकको रेकर्ड तोड्न अर्को चमत्कार दोहोरिनु पर्ने हुँदा रेकर्ड तोड्न मुस्किल रहने देखिन्छ।
४. बैंगलोरको टिम योगफल
अप्रिल २३,२०१३ समर्थकले गेलको कीर्तिमानी १७५ रनको पारीको लागि सम्झिने गर्छन्। तर, सोहि दिन गेलको विशाल पारीको मद्दतमा विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बैंगलोरले सर्वाधिक टिम योगफल खडा गर्दै अर्को किर्तिमान पनि बनाएको थियो।
साउथ अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबी डि भिलियर्सले इनिंगको अन्तिमममा ८ बलमा ३१ रनको तुफानी पारि खेले पछि आरासिबिले ५ विकेटको क्षेतीमा २६३ रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिंगमा उत्रिएको पुने मात्र १३३ रनमा समेटिएको थियो।
प्रत्यक ओभरमा १३ रनको औसतले रन बनाएको बैंगलोरले आईपीएलमा सर्वाधिक टिम योगफल तयार पारेको थियो जुन टि-२० फर्म्याटमा विश्वकै चौथौ सर्वाधिक टिम योगफल हो। आईपीएलमा सर्वाधिक टिम योगफलको यो रेकर्ड तोड्न मुस्किल हुनेछ।
५. बैंगलोरको लज्जास्पद योगफल
बैंगलोरले सर्वाधिक टिम योगफलको कीर्तिमान कायम गर्दा सबैभन्दा कम टिम योगफलको रेकर्ड पनि उसैको नाम रहेको छ।
२०१७ मा कोलकाता विरुद्ध बलियो ब्याटिंग टिम मानिने बैंगलोरले लज्जास्पद ब्याटिंग गरेको थियो। पहिलो ब्याटिंग गरेको घरेलु टोली कोलकातालाई आरासिबिले १३१ रनको झिनो स्कोरमा रोक्न सफल भएको थियो। तर, जवाफी ब्याटिंगमा उत्रेको बैंगलोर ४९ रनमै समेटिएको थियो।
कप्तान कोहलीलाई पहिलो ओभरमा गुमाएपछि बैंगलोरका ब्याट्सम्यानहरु लगातार पेभेलियन फर्केका थिए। नाथन कुल्टर-नाइलले सुरुवाती सफलता दिलाउदा उमेस यादव, क्रिस वोक्स र कोलिन डि ग्राण्डहोमले पनि साथ दिंदा बैंगलोर अपत्यारिलो योगफलमा समेटिएको थियो।
ब्याट्सम्यानलाई मद्दत गर्ने पिच र ब्याट्सम्यान बलरमाथि निकै हावी रहने गरेकाले आरासिबिको कम टिम योगफलको रेकर्ड टुट्न मुस्किल छ।
६. सर्वाधिक ह्याट्रिक
आइपिएलमा सर्वाधिक ह्याट्रिक लिने दुर्लभ किर्तिमान भारतिय भेट्रान लेग स्पिनर अमित मिश्राको नाममा रहेको छ। १५७ विकेट हात पारिसकेका मिश्रा आईपिएलमा सर्वाधिक विकेटकर्ताको लासिथ मलिंगा ( १७० विकेट ) पछि दोस्रो स्थानमा छन्।
३३ वर्षिय मिश्राले मे १५, २००८ मा डेक्कन चार्जर्स विरुद्ध पहिलो ह्याट्रिक लिएका थिए। दिल्लीको प्रतिनिधित्व गरेका उनले खेलको अन्तिम ओभरको पहिलो तीन बलमा रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा र आरपी सिंहलाई पेभेलियनको बाटो देखाएका थिए।
उनले दोस्रो ह्याट्रिक मे २१, २०११ मा डेक्कन चार्जर्सको प्रतिनिधित्व गर्दै किङ्स-११ पन्जाब विरुद्ध लिगेका थिए। उनले त्यसक्रममा रायन म्याकलरेन, मन्दिप सिंह र रायन ह्यारिसको विकेट चड्काएका थिए।
उनले तेस्रो ह्याट्रिक अप्रिल १३, २०१३ मा पुने वारियर्स विरुद्ध लिएका थिए। सनराइजर्स हैदरावादको प्रतिनिधित्व गर्दै भुवनेश्वर कुमार, राहुल शर्मा र अशोक डिन्डाको विकेट लिगेका थिए।
मिश्राले सबै तिन ह्याट्रिक डेथ ओभरमा बलिङ गरेर लिएका थिए। उनको सर्वाधिक ह्याट्रिकको दुर्लभ कीर्तिमान तोडिन निकै मुस्किल देखिन्छ।
७. एकै सिजनमा सर्वाधिक रन
विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मध्येक विराट कोहली २०१६ संस्करणको आईपिएलमा उत्कृष्ट लयमा थिए। उक्त सिजन १६ खेल खेल्दै ९७३ रन बनाएका विराटले एक सिजनमा सर्वाधिक रन बनाउने किर्तिमान आफ्नो नाम गरेका थिए।
नवौं संस्करणको आईपिएलमा उक्त कीर्तिमान बनाउने क्रममा दायाँ हाते ब्याट्सम्यानले अधिकांश रन चोटिल हातको बाबजुद बनाएको थिए। उनी तीन सिजनमा ५०० भन्दा बढी रन बनाउने पहिलो कप्तान पनि हुन् जुन क्रममा २०१३ मा ६३४ रन , २०१५ मा ५०५ रन र २०१६ मा ९७३ रन बनाएका थिए। उनले उक्त सिजन ८६ को अद्भुत औशतमा रन बनाएका थिए।
कोहलीले त्यस सिजन ४ वटा शतकीय पनि बनाएका थिए जुन एकै सिजनमा सर्वाधिक शतकको कीर्तिमान हो। उनले २ शतक गुजरात लायन्स विरुद्ध तथा अन्य दुई शतक राइजिङ पुने सुपर जायन्ट्स र किङ्स-११ पन्जाब विरुद्ध बनाएका थिए।
८. सर्वाधिक आईपीएल फाइनल खेल्ने खेलाडी
भारतिय पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले किर्तिमानी ९ पटक आईपिएलको फाइनल खेलेका छन्। यस क्रममा चेन्नाई सुपर किङ्ग्सको कप्तानी गर्दै उनले २०१०, २०११ र २०१८ मा गरेर तीन पटक आइपिएलको उपाधी समेत जिताएका छन्।
उनले ८ सिजन चेन्नाइको तथा २०१७ मा राइजिंग पुने सुपर जायन्ट्सको कप्तानी गर्दै फाइनल खेलेका थिए। सन् २००८, २०१० देखि २०१३, २०१५, २०१८ र २०१९ मा धोनीले चेन्नाईलाई फाइनल पुर्याएका थिए। ९ सिजन फाइनल त्यो पनि कप्तानको रुपमा खेल्नु कुनै पनि खेलाडीको लागि सहज हुनेछैन।
← कोरोना भाइरसको असर कम गर्न सक्ने सबैभन्दा सानो एन्टिबडी पत्ता लाग्यो
सर्वाेच्चको प्रश्न : पीसीआर परीक्षणमा शुल्क किन ? →
अक्षय कुमारले लिए १२० करोड पारिश्रमिक ?
निजगढ नगरपालिकाद्वारा आईसोलेसन निर्माण